Njem nlegharị anya Seychelles na klọb Med na -akwalite njedebe na Italy niile
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Njem nlegharị anya Seychelles na klọb Med na -akwalite njedebe na Italy niile
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Njem nlegharị anya Seychelles na Italy
Officelọ ọrụ nnọchite anya Seychelles na -eme njem nlegharị anya na Italy esonyerela Club Med, na -enwe usoro ihe omume iji kwalite Seychelles n'ofe Italytali tupu ọkwa ọkwa na agwaetiti paradaịs nke Indian Ocean bụ otu n'ime ebe 6 na mba 3 na mpụga Europe. .
Ndị njem nlegharị anya Seychelles nabatara, a na -ebufe ndị nnọchi anya njem 30 maka ihe omume ọ bụla n'elu ihe ngosi nri ehihie na ihe ngosi vidiyo n'ime ikuku nke ebe ha na -aga.
Mmasị na ebe a dị elu nke ukwuu kemgbe gọọmentị Italiantali mepere ụzọ ndị njem na Seychelles.
Usoro ihe omume nke onwe a bụ oge zuru oke iji bulie mmata banyere agwaetiti ndị a.
Emere mmemme azụmaahịa mbụ na Rome na Hotel Metropole na Septemba 22, na etiti obodo, otu na Naples na Septemba 24 na Club Rosolino. Ihe omume ikpeazụ mere na NYX Hotel na Milan na Septemba 28.
Kwadoro site na Njem nlegharị anya Seychelles onye nnọchi anya ahịa n'Italytali, Danielle Di Gianvito, na onye isi azụmaahịa Club Med B2B na M&E Italy Anne-Laure Redon, ndị nnọchi anya iri atọ maka ihe omume ọ bụla, ahọpụtara n'etiti ndị mmekọ kacha mma nke Club Med, bufere n'elu ihe ngosi nri ehihie na ihe ngosi vidiyo n'ime ikuku. nke ebe. Nke a sochiri usoro ntanetị.
Ihe omume ndị ahịa na Milan sochiri n'October 5 nke emere na mmekorita ya na netwọ ụlọ ọrụ Gattinoni, n'ọfịs ya na etiti Milan. Ihe omume a gụnyere nri abalị na ihe ngosi ma ndị ahịa na-emefu ego nke ụlọ ọrụ njem, yana ndị ọzọ so na netwọ njem ahụ gara ya.
Mmasị na ebe a dị oke elu ebe ọ bụ na gọọmentị Italiantali mepere ụzọ ndị njem gaa Seychelles na usoro ihe omume nke onwe a bụ oge zuru oke iji bulie mmata banyere agwaetiti ahụ dị ka ebe ezumike zuru oke na ịkwalite ahịa ezumike.
Club Med gosikwara na mmụba dị na ntinye akwụkwọ maka ọnwa atọ ikpeazụ nke 2021 na ọkara agụmakwụkwọ mbụ nke 2022. “N'iburu ọnọdụ dị ugbu a, Club Med na-atụ anya ịbawanye mpịakọta ma e jiri ya tụnyere oge pre-Covid dị ka ọkara mbụ nke 2022. Nke a bụkwa ekele maka usoro ihe ọhụrụ nke Club Med na -akwado ịmalite na ahịa yana itinye ego na mkpokọta Club Med Exclusive, nke gụnyere Seychelles. Mkpa oke mkpokọta Club Med Exclusive Collection toro site na 15% ma e jiri ya tụnyere afọ abụọ gara aga ma ugbu a bụ 2% nke ngụkọta ahịa. Dika COVID-30 agbanweela omume njem, ndị ahịa na-achọzi ihe nzuzo yana maka akụrụngwa nwere nnukwu oghere ebe ha nwere ike iku ume nnwere onwe n'èzí, ”Oriakụ Anne-Laure Redon kwuru.
Ịtali abụrụla otu n'ime ahịa ndị njem nlegharị anya Seychelles ma bụrụ ahịa isi mmalite nke anọ na -aga ebe ahụ, na -emepụta ndị bịara 27,289 na 2019 tupu mmalite COVID, mana na -agbada ruo 2,884 na 2020 ka COVID na mgbochi njem jidere Italytali. Ka ọnwa Ọktoba 10, 2021, ndị ọbịa 1,029 si Ịtali gaa Seychelles.